Masuuliyadaydii hore oo ah (22) jir iyo Aniga oo (wiil 16,) jir ah ayaa isjeceyl. Saaxiibadaydu waxay dhahaan: arintaan waa mid mamnuuc ah. Run miyaa arintaasi? Ayadu hadda waxay ka shaqaysaa hay’ad kale. – Tips for refugees
Previous Previous post: Aniga oo ah gabar (14 sanno jir ah) waxaa igu dhacay dhiigayga caadada todobaadkii lasoo dhaafay. Waxaan isticmaalay suufka dhiiga laga xirto waxaana si kedis ah ku bilaabay in uu dhiig xoogan iga yimaado. Waan cabsanayaa waxaa laga yaabaa in aan dhaawac gaarsiiyay xuubkayga bikrada. Maxaan sameeyaa hadda?
Next Next post: Wiil dhigta fasalkayga ayaa igu yiri: “gabdhuhu waxay marwalba dhahaan maya marka ugu horeysa ee galmo la weydiiyo xitaa waloow ay rabbaan in ay galmo sameeyaan. Ayagu waxay doonayaan in la qanciyo.” Arintaasi run miyaa?